अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ६५ हजार बढी ! « MNTVONLINE.COM
अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या तुलनात्मक रुपमा घटेपनि सामाजिक दूरी कायम नहुदा संक्रमितको संख्या भने बढिनै रहेको देखिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा अमेरिकामा ४९३ जनाको मृत्यु भएको छ । अहिलेसम्म अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ६५ हजार ५७६ पुगेको छ ।
त्यस्तै गरि पछिल्लो २४ घण्टामा अमेरिकामा ४६ हजार ४२७ जना संक्रमित पुष्टि भएको छ । योसँगै अमेरिकामा संक्रमितको संख्या ५१ लाख ९८ हजार २२ पुगेको छ । त्यस्तै अमेरिकामा अहिलेसम्म २६ लाख ६३ हजार ९५४ जना ठिक भएका छन् भने सक्रिय संक्रमित २३ लाख ६८ हजार ४९२ जना रहेका छन् । त्यस्तै अमेरिकामा अहिले १७ हजार ८९७ जना आइसीयुमा उपचारत रहेका छन् ।
अमेरिकामा अहिलेसम्म न्युयोर्कमा मात्र मृत्यु हुनेको संख्या ३२ हजार ८४० जनाको मृत्यु पुगेको छ । त्यस्तै न्युयोर्कमा संक्रमितको संख्या ४ लाख ५० हजार ४२८ जना संक्रमित भएका छन् ।
विश्वभर ३ करोड २४ लाख बढीमा कोरोना संक्रमण, ९ लाख ८७ हजारको मृत्यु !
काठमाडौँ । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)बाट ३ करोड २४ लाख बढी संक्रमित भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ लाख १४ हजार ७ सय ८८ जना कोरोनाका
धादिङमा ट्याक्सी दुर्घटना, एकको मृत्यु, ४ जना घाइते !
आइपीएलमा बैंगलोरमाथि पञ्जाबको सहज जित !
काठमाडौंमा डेरा खोज्न आउनेले घरधनीको सिक्री लुटे !
क्यानाडामा पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर शुरु !